အလန်းဇယားတွေဖွင့်လို့ ပွင့်သွားတဲ့ကံစမ်းမဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » အလန်းဇယားတွေဖွင့်လို့ ပွင့်သွားတဲ့ကံစမ်းမဲ
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 30, 2011 in Drama, Essays.. |9comments
“အလန်းဇယားတွေ ဖွင့်လို့ ပွင့်သွားတဲ့ကံစမ်းမဲ”
အဲဒီနေ့က စိတ်တွေအတော်ကိုလေသွားတာ။ တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား မဟုတ်မခံပုံစံ နဲ့လူကြီးက လာကွိုင်တာဗျာ။
သူပြောတဲ့အတိုင်းများ မရရင် တကယ်ဆော်မယ့်ပုံ။ နောက်ဒေါကြီးမာန်ကြီးနဲ့
“ဒါက မင်းတို့ ဆီက ထုတ်ပေးထားတဲ့လက်မှတ်လေ….မင်းတို့တာဝန်ယူရမှာပေါ့။ ရက်လွန်တာ မလွန်တာလာမပြောနဲ့ ငါမသိဘူး ။ မင်းတို့စာရွက်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်းပေးမှာလား မပေးဘူးလား ဒါပဲပြော။ကျန်တာလာမပြောနဲ့ မကြားချင်ဘူး” ဆိုတာကိုိဘဲထပ်ခါထပ်ခါပြော ပြောနေတော့ ကြောက်တာပေါ့ဗျာ။
ဒါလေးက ကိုအောင်မောင်းက သူအလုပ်ထဲမှာ တစ်ခါက ကြုံခဲ့တာလေးကို ပြန်ပြောပြနေတာပါ။
“လူကြီးတွေရောက်လာတော့ မှ သူပေါက်ထားတဲ့ ကံစမ်းမဲနဲ့ ညီမျှတဲ့ပိုက်ဆံအလျော်ပေးလိုက်ရတာပေါ့”လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။
ဖြစ်တာက ဒီလိုပါ ကိုအောင်မောင်းတို့ ကုမ္မဏီက ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းအသစ်ကို ကံစမ်းမဲတွေထည့် လို့အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်ပါသတဲ့။ အဲဒီကံစမ်းမဲကာလကို ခြောက်လ အတွင်းဆိုပြီးရက်တွေဘာတွေသတ်မှတ်လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါသတဲ့။ ကံစမ်းမဲပေါက်လို့လာထုတ်တဲ့အချိန်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တဲ့ 2နှစ်ကျော်ကျော်လောက်တောင်လွန်နေသလို အဲဒီပစ္စည်းကလဲ ကိုယ်စားလှယ်နောက်တစ်ယောက်လက်တောင်ပြောင်းသွားတာတောင်ကြာပါပြီတဲ့။
ဒါပေမယ့်မဲပေါက်တဲ့သူကလည်း သူ့မဲပေါက်တဲ့စာရွက်ထဲမှာပါတဲ့လိပ်စာအတိုင်းလိုက်လာတာကိုး။နောက်ပြီး သူနေတဲ့အရပ်ကလဲ ဆက်သွယ်ဘို့ အတော်လေးခက်တဲ့ ဟိုချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းကရွာလေးဖြစ်နေပါသတဲ့။
မဲပေါက်တဲ့သူကလဲ အတော်ကို ရိုးသားတဲ့ ရွာသားကြီးပါဘဲ။
သူက လဲ ချက်ခြင်းလာနိုင်တဲ့အရပ်မဟုတ်ဘူး လူကြုံလဲမရှိဘူး အခုတောင် အလှူတစ်ခုရှိလို့ ရောက်လာတုန်းကြုံလို့ထုတ်ရတာလို့ဆိုပြီး ဇွတ်ကိုတောင်းတာပါတဲ့.။
သူ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတာက သူကံစမ်းမဲပေါက်ထားတယ် သူကြိုက်တဲ့အချိန်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ ခံယူထားတာပါဘဲတဲ့။
အဲဒါလေးကို သွားသတိရမိတော့ ကံစမ်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပါတ်သက်ဘူးတာတွေက ရုပ်ရှင်ကြည့်သလို စိတ်ထဲကို တန်းစီလို့ပြန်သတိတွေရလာပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကံစမ်းမဲတွေဘယ်အချိန်က စသလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျကြီး မမှတ်မိပါဘူး။ကျနော်နဲ့ကံစမ်းမဲ စတင်လို့ ပါတ်သက်တာကတော့ 1999ခုနှစ်မှာပါဘဲ။ကျနော်တို့နဲ့အခြားအဖွဲ့ တစ်ခုပေါင်းပြီး ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။အဲတော့လည်းအများနည်းတူ ရောင်းအားကောင်းခြင်ရင်ကံစမ်းမဲထည့်လိုက်ပေါ့ဆိုတာကိုအားလုံးကတစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲသဘောတူုလိုက်ကြပါတယ်။ အရင်ကလည်းလန်ဒန်စီးကရက်စပေါ်ကာစမှာ ဘူးထဲကို ကံစမ်းမဲအနေနဲ့ အက်ဖ်အီးစီတွေထည့်လို့ လပ်ကီးသောက်နေတဲ့ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲခေါ်သွားဘူးပါတယ်။
အဲဒီမတိုင်ခင်ကတော့ကံစမ်းမဲဆိုရင် ငွေသားထည့်ရင်ထည့် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘယ်မှာလာထုတ်ပါ ဘာညာကွိကွရေးထားတဲ့ စာရွက်လေးတွေထည့်တဲ့အခါထဲ့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲဆိုပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပေါ်လာပြန်ရော။
တချိုိ့ကလဲ ဘူးပေါ်မှာ အထုပ်ပေါ်မှာ ကော်နဲ့ကပ်လွှတ်လိုက်တာပေါ့။
ဖြစ်ချင်တော့ကျနော်တို့က ကံစမ်းထည့်မယ်မထည့်မယ် ဆိုတာမသေချာခင်ပစ္စည်းတွေက ထုတ်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားရော။အဲတော့ ပစ္စည်းထည့်ပြီးသားဖာတွေကို ပြန်ဖွင့် ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပါတဲ့ ကဒ်ပြားတွေကို ထပ်ထည့်ပြီးတော့ ပက်ကင်ပြန်ပိတ် ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတော့တာပေါ့။
ဒါနဲ့ဘဲ အစက ကံစမ်းမဲမထည့်ရသေးတဲ့ ပစ္စည်းဖာတွေထဲကို ပစ္စည်းအရေအတွက်အလိုက် ကံစမ်းမဲတွေထည့်ရတော့တာပေါ့။ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပါတဲ့ကဒ်ပြားတွေကို ဖာတွေထဲပြန်ထဲ့ ပြီးတော့မှ ပက်ကင်ပြန်ပိတ်ပေါ့ ။
ကျနော်တို့ကလဲ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပါသည် လို့ကြေငြာပြီးရောင်းတာပေါ့။ အဲဒီအထိအိုကေနေတာပါဘဲ။သိပ်မကြာပါဘူး ဈေးကွက်ထဲကနေ အသံတွေထွက်လာတာကတော့ ကံစမ်းမဲမပါဘဲ ပါတယ်ဆိုပြီးလိမ်ရောင်းတယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဲဒီတော့ ထည့်ရဲ့သားနဲ့မပါဘူးပြောတော့ ဖောက်သည်ကဘဲလိမ်သလား ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကဘဲ မထည့်ဘဲ ယူထားသလားဆိုပြီး စုံစမ်းရေးတွေလုပ်ရတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာနောက်ဆုံးရလာတဲ့အဖြေကတော့ ကံစမ်းမဲတာဝန်ယူခိုင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆီကနေ ကံစမ်းမဲ့ ကဒ်ပြား အထပ်လိုက်ကြီးပြန်ရလိုက်တာပါဘဲ။ အဖြစ်ကတော့ ဒီလို………………. သူတို့အဖွဲ့ကိုနေ့ဆိုင်းညဆိုင်းခွဲပြီး အပူတပြင်း မဲတွေထည့်ခိုင်းရတဲ့အခါ အားလုံးက စိတ်တွေလော လူကလဲပင်ပန်း ဖာအားလုံးပက်ကင်တွေပိတ်ပြီးချိန်မှာ အရေအတွက် ကွက်တိပေးထားတဲ့ ကံစမ်းမဲကဒ်တွေက လက်ထဲမှာ အချပ်200ကျော်300လောက် ကျန်နေပါလေရော။ခက်တာက ဖာတော်တော်များများကိုလဲ
ပက်ကင်ပိတ်ပြီးလို့ ဂိုဒေါင်ကိုပြန်လွှဲပြီးနေပြီ။ပြန်ရှာဘို့ကလဲ မဖြစ်နိုင်တော့ ဘူး။ ကံစမ်းမဲထည့်ဘို့ အရန်သင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ဖာတွေကို နောက်တစ်ယောက်က ထည့်ပြီးပြီမှတ်လို့ ပက်ကင်ပြန်ပိတ်လွှတ်လိုက်တာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ နောက်ပြဿနာပေါ်မှ ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းမယ်ဆိုပြီး ငြိ်မ်နေလိုက်ကြတာပေါ့။ မတော်တဆဖြစ်တာဘဲဆိုပြီး သဘောထားကြီးစွာနဲ့ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လဲကုမ္မဏီဘက်က ဘာမှနစ်နာသွားတာမှမဟုတ်တာဘဲနော်။
အဲဒီတုံးက တစ်သောင်းဆိုတာ အတော်အသုံးခံသေးတဲ့အချိန်မှာ တစ်သောင်းဆုအတော်များများပေါက်ပါတယ်။ အဲဒီတစ်သောင်းဆုပေါက်တဲ့လူတွေကို ဓါတ်ပုံတွေရိုက် ပြီး ကံစမ်းမဲပေါက်တာတွေကို လိုက်ပေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လဲတစ်သိန်းဆုဆိုတာကတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်သာပြောတယ်တစ်ယောက်မှပေါက်တာမတွေ့ပါဘူး။စီစဉ်သူကတော့ ထည့်ပေးတယ်ပြောတာပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်လဲ အဲဒီတစ်သိန်းရသူတစ်ယောက်မှမရှိပြန်ပါဘူး။ ဘယ်လိုဘဲပြောပြော အဲဒီကံစမ်းမဲပါတာကြောင့် ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအသစ်ကရောင်းကောင်းခဲ့တာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
အဲဒီပစ္စည်းက လူတွေကြားမှာပျံ့နှံ့လို့ ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကံစမ်းမဲပေါက်တာ နည်းနည်းများများ ပေါက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျေနပ်သွားကြတာများပါတယ်။
အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ တံဆိပ်အသစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ်ဆိုရင် ကံစမ်းမဲမပါလို့ကတော့နားထားပါဘဲ။
နည်းနည်းများများ ကံစမ်းမဲ ပါကိုပါမှ ရောင်းရတာကတော့အသေအချာပါဘဲ။
ဟိုအရင်ကတော့ကံစမ်းမဲအစမှာ ငါးကျပ်တစ်ဆယ်ကို တစ်ခါထဲထည့်ပေးကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့်အခုခေတ်မှာ ၀ိုင် ရမ် ၀ီစကီ စတဲ့အရက်တော်တော်များများ တံဆိပ်အမျိုးမျိုး နံမည်အမျိုးမျိုးတပ်လို့
ဒီအရက်တွေထဲမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား လေးနှစ်တကြိ်မ်မှ ကျင်းပတဲ့ ဥရောပဖလား ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကိုအမှီပြုလို့ ကံစမ်းမဲတွေထည့်ကြပါတယ်။
တကယ်အဖြေမှန်သူကိုလည်း တကယ်ကို ဆုအမှန်အကန်ပေးတဲ့အတွက်
အခုအခါမှာတော့ အရက်အမျုိးမျုိးထဲမှာ ကံစမ်းမဲက မပါမဖြစ်ပါဘဲ။
၀ယ်တဲ့သူကလဲ ကံစမ်းမဲပါတယ်ဆိုတာနဲ့ ဘာမှမပြောဘဲဝယ်သွားလိုက်တာဘဲ။
အဲဒီပုလင်းပြားက တစ်ခါ တစ်ထောင်ကျပ်ပေါက်တယ်။
အဲလိုဆက်ခါဆက်ခါပေါက်တာကို မြင်သွားတော့ နောက်လူတွေကလဲ အလိုလို ဒီတံဆိပ်ကိုဘဲ
၀ယ်သူက တစ်ရာပေါက်လဲကျေနပ် နှစ်ရာပေါက်လဲကျေနပ်ပေ့ါ။
အရက်မှ မဟုတ်ပါဘူး ဆပ်ပြာအမွှေးခဲ ဆပ်ပြာမူန့် ဆပ်ပြာခရင်မ် အားလုံးခဲခြစ်ကံစမ်းမဲထည့်ကြတာပါဘဲ။
ကံစမ်းမဲကလဲ တစ်ခဲ တစ်ထုပ် တစ်ဘူး ထည့်ပေးထားတတ်ပါတယ်။
အဲဒီကံစမ်းမဲပေါက်တာကို ဆိုင်မှာပြန်လဲရင် အဲဒီလဲပေးတဲ့ဆိုင်ကို ကုမ္မဏီက 10% သို့မဟုတ် 15%၀န်ဆောင်ခပြန်လို့ပေးတတ်ပါတယ်။
အဲတော့လဲအခုခေတ်ကြီးမှာ ဘာဘဲလုပ်လုပ်ကံစမ်းမဲထည့်ရင် လန်းသပေါ့ဗျာ။
သားစာကို ဖတ်သူတွေ အတွက်
ပထမ ဆု ဘဲကင် တစ်ခြမ်း + ဘီယာ ၁ ဂျား
ဒုတိယ ဆု ဘဲကင် တစ်စိတ် + ဘီယာ ၃ ခွက်
တတိယ ဆု ဘီယာ ၂ ခွက်
လေးပေါက်ကလည်း ကိုးရီးယား ကားကြည်.ရသလိုလုပ်နေပြန်ပြီ ကောင်းခန်းရောက်မှ မျှော်တဲ.
မြန်မြန်ဆက်နော် လေးပေါက်ဆက်မှ လိုင်းကျနေမှာ ကြောက်လို. တစ်ခါတည်းများ တင်လိုက်ပါလား
အစ်ကို windtalker မြန်မြန်ကံစံမဲ ထည်.လေဗျာ အဲဒီလောက်ဆို မိုက်တယ်ဗျ
အနိမ်.ဆုံး ကံစမ်းမဲ.က Grand Royal လောက်မှ ရမှာနော်
ကံစမ်းမဲဆိုတာကလည်း စေတနာရှိလို့ပေးတာမဟုတ်ပဲ … လိမ်ရောင်းတဲ့ လိမ်နည်းတမျိုးပါပဲ လေးပေါက်ရေ
လိမ်ရောင်းတယ်ဆိုပြီး အဲလိုတော့လဲ တစ်ထစ်ချပြောလို့မရပြန်ပါဘူး။
စိတ်ဝင်စားအောင် မက်လုံးပေးတယ်လို့ ဆိုရင် မှန်မယ်ထင်ပါတယ်။
အခုတော့ ၇ ပွိုင့်တော့ ယူသွားပီဗျ ..
နောက် ပြီး ဂွမ်းသွားတာလေးကိုလည်း သိချင်ပါသေးတယ် …
ကံစမ်းမဲဆိုတာ ၀ယ်သူတွေရဲ့အပိုလိုချင်တဲ့ လောဘကို မောင်းနှင်အားအသွင် တဖက်လှည်ပြီး ရောင်းအား အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ပညာလေးတခုလို့ မြင်ပါတယ်။
တချို့ကျ ရောင်းကောင်းအောင် ဘယ်လောက်ဆုကြီးကြီး ကံစမ်းမဲထည့်ထားတယ်
ဘယ်လောက်ထိကံစမ်းမဲထည့်ထားလဲဆိုတာ စားသုံးသူတွေက သိတာမှမဟုတ်တာ
ဥပမာ-သိန်း၂၀၀ကျော်ထည့်သွင်းထားပါသည်ဆိုပြီး သိန်းဆယ်ဂဏန်းလောက်ပဲ သုံးချင်သုံးမှာပေ့ါ